ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့နိုင်ငံကို မြန်မာဟက်ကာများ တရားဝင် နည်းပညာစစ်ပွဲကြော်ငြာလိုက်ပါတယ် – Blue Sea
blueseaskt | March 15, 2019 | News | No Comments
လွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းက မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့ နည်းပညာတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်လျာက်ရှိတာ ဖြစ်ပြီး
ယခင်ရက်ပိုင်းထဲက မြန်မာဟက်ကာတစ်ချို့မှ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးWebsiteတွေကို တိုက်ခိုက်လာတာတွေ့ရပါတယ်
ယခုအချိန်မှာတော့ Union of Under ground Myanmar hackersလို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာဟက်ကာတွေနဲ့ ဟက်ကာအဖွဲ့တွေ တစုတစည်းထဲပေါင်းထားတဲ့ အဖွဲ့စည်းကြီးမှ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့နိုင်ငံကို နည်းပညာစစ်ပွဲဆင်နွှဲတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်းကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်
ဘင်္ဂလီကိစ္စဟာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ကာက စွပ်စွဲပြောဆိုနေသလိုမျိုး ကျနော်တို့နိုင်ငံက ဘင်္ဂလီတွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေခြင်းမဟုတ်တာကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေအသိဆုံးပါ။ သူတို့ဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေလဲမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဘင်္ဂလီတွေပါ။ ဒါကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်နိုင်ငံက လက်မခံပဲ မြန်မာတိုင်းရင်းသားပါဆိုပြီး စွပ်စွဲတယ်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကို အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။ ဘင်္ဂလီ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေလက်ချက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတွေ ကျဆုံးသွားရပါတယ်။ ဒါကို ကမ္ဘာကသိသိနဲ့ မျက်ကွယ်ပြုထားပါတယ်။ ကုလကလဲ ကျနော်တို့နိုင်ငံကိုဖိအားတွေပေးပါတယ်။
ဒီအဖြစ်မှန်တွေကို ကျနော်တို့ထက် သတင်းမီဒီယာတွေကပိုသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ကမ္ဘာကို သိအောင်မပြောနိုင်ကြဘူး။ မပြောနိုင်ကြတာလား တမင်မလုပ်ကြတာလားဆိုတာကတော့ သူတို့ပဲသိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့မလုပ်တဲ့အလုပ်ကို ကျနော်တို့က #OP တစ်ခုအနေနဲ့ လူသိများဖို့ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဘာသာရေး တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အမှန်ကို ကမ္ဘာကသိဖို့ တိုက်ခိုက်တာပါ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ မူစလင်ကိုးကွယ်သူတွေလဲရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာကို ကျနော်တို့အလေးထားပါတယ်။ တိုက်ခိုက်စရာမလိုပါ။ ခု OP ဟာ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းကလည်း မြန်မာမှ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့ နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးWebsiteတွေကို သဖတစ်ကယ်လို့ ဘင်္ဂီလီတွေဟာ မူစလင်မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားဘာသာဖြစ်နေခဲ့ရင်လဲ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့မြေ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် တိုက်ခိုက်မှာပါပဲ။
Bangli issue had been very much concerned issue for our country. As, we, Myanmar are peacefully living people that we strongly know and believe that we are not doing ethnic cleaning but the news say (without any withnesses). Bengali are not citizen of Myanmar and they are NOT included in Myanmar’s National races. As they are called “Bangali”, they are the citizens of Bangladesh. But Bengalidesh keep telling that “Bangali” are citizen and race of Myanmar.
Because of “Bangali” Terrorists who attacked Myanmar Police Forces, many of Police Officers were killed. UN is also putting pressure on Myanmar Government. While we, Myanmar, are not doing ethnic cleaning but preventing our homeland from being devoured by “Bangali”; in turn of Bangladesh, we are not sure if UN and associated countries are INTENTIONALLY making it happen or not.
So, we, hereby, doing this “#OP Bangladesh 2019” to spread the world that we are being devoured by “Bangali”, who are NOT Myanmar’s National Race nor citizen. This will NOT be racial or religious attack. This will be the attack to let the world know the truth inside Myanmar.
In our country, there are many religions living together with their own devotions. We want to make it clear that truly give respect to their own belief on their specific religion. So, IF “Bangali” are not Muslims or any religion, we will do the attack; which means, our attacks will NOT be based on Religion. We fight for our mother land. We fight for our own country.
#OP_BD is coming soon.
မှန်လုံကားစီးရမှာ သတိထားစရာဖြစ်လာပြီလား မှန်လုံကားစီးနေရင်း အသက်သေဆုံးခဲ့သော လူငယ်တစ်ဦး